အခန်း(၄) ကရင်သောင်းကျန်းသူများပေါ်ပေါက်လာခြင်း - Myanmar Political Research Organization
Home » history-2 » အခန်း(၄) ကရင်သောင်းကျန်းသူများပေါ်ပေါက်လာခြင်း
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ အလံနီပါတီနှင့် ရဲဘော် ဖြူတို့လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းကြ၍ တစ်ပြည်လုံး အုံကြွဆူပူနေချိန်တွင် ကရင်လက်နက်ကိုင် အင်အားစု များသည်လည်း လှုပ်ရှားထကြွလာကြသည်။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ရက်တွင် ပါတီတစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း တောခိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲဘော်ဖြူများသည်လည်း တစ်ရက်တည်း တစ်ချိန် တည်းမဟုတ်သည့်တိုင် ရက်ပိုင်းအတွင်း တဖွဲဖွဲတော ခိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်များမှာမူ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း တညီတညွတ်တည်း တောခိုခဲ့ကြခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့၏ စည်းရုံးဆွဲဆောင်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ အစိတ်အပိုင်း အလိုက် တောခိုသောင်းကျန်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် ကရင်လက်နက်ကိုင်များကို မြှောက်ပင့်သွေးထိုး ပေးနေချိန်ပင် အစိုးရနှင့် အပေး အယူလုပ်ကာ ညှိနှိုင်းလျက်ရှိသည်။ တပ်မတော်တွင် စစ်ဦးစီးချုပ်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်စမစ်ဒွန်းဖြစ်ပြီး လေတပ် ဦးစီးချုပ်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောရှီရှိုးဖြစ်ရာ စစ်ရေးအကူ အညီနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။
ဖဆပလအစိုးရက တပ်နီဗိုလ်ချုပ်နှင့် ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဗိုလ်သိန်းဒန်၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်နှင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဗိုလ်ရန်အောင် နှင့် အရန်ဗဟိုကော်မတီဝင် ဗိုလ်အောင်မင်းတို့ကို ထောင်မှလွှတ်ပေး၍ လက်ဝဲညီညွတ်ရေးရရှိရန် ကြိုးစား နေသည်။ လက်ဝဲဝါဒီအများအပြားက ကရင်လက်နက် ကိုင်များအရေးကို ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့သမား၏ လုပ်ကြံမှု အဖြစ်စွပ်စွဲနေသဖြင့် ဖဆပလအစိုးရသည် ဗိုလ်သိန်း ဒန်နှင့် ဗိုလ်အောင်မင်းကို တောတွင်းရှိ ဗမာပြည်ကွန် မြူနစ်ပါတီဌာနချုပ်သို့ စေလွှတ်ကာ လက်ဝဲညီညွတ် ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လာသည်။၁ (၁။ သိန်းဖေမြင့်၊ တော်လှန်ရေးကာလနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများ၊ စာမျက်နှာ၄၉၃မှ ၄၉၅။)
ကေ အင် န် ယူ သည် လက် ဝဲ ညီ ညွတ် ရေး အောင်မြင်မည်ကို စိုးရိမ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဝဲ ညီညွတ်ရေးပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းနည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်လာသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်စမစ်ဒွန်းက သခင်နု အား ချဉ်းကပ်၍ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြောင်း တင်ပြလာသည်။ ဗိုလ်လက်ျာကလည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမလုပ်ရပါက အစိုးရအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်လာသည်။ ဗိုလ်ဇေယျသည်လည်း တောမခိုခင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးလုပ်ချင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ရာ စမစ်ဒွန်းတို့၏ ထောက်ခံမှုရှိသည်ဆိုခဲ့သည်။၂ (၂။ သိန်းဖေမြင့်၊ တော်လှန်ရေးကာလနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများ၊ စာမျက်နှာ ၄၉၃မှ ၄၉၄။) စင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သွားပါက လက်ဝဲညီညွတ်ရေး အောင်မြင်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြသဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကန့်ကွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အခြေအနေရှုပ်ထွေးနေစဉ်တွင် ကရင်စစ်ရဲများ သည် ရန်လိုသည့်အပြုအမူများကို မကြာခဏပြသလာ ကြသည်။ ကရင်လက်နက်ကိုင်များ တောခိုတော့မည် ဟူ၍လည်း သတင်းများထွက်ပေါ်လာသည်။ ကေအင်န် ယူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည့် ကရင်အမျိုးသားအချို့ သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် စတင်ဆူပူလာကြသည်။ကေအင်န်ယူအဖွဲ့၏အာဘော် ဖြစ်သော သုဝဏ္ဏတိုင်းသတင်းစာကလည်း ဆူပူ အုံကြွရေးကို ပိုမိုလှုံ့ဆော်လာသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် ကေအင်န်ယူအဖွဲ့၏ လက်အောက်ခံ ကေအင်န်ဒီအိုတပ်ဖွဲ့များသည် သောင်းကျန်းမှုပြင်းထန်စွာပြုလုပ်လာကြသည်။၃ (၃။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင် စာချုပ်စာတမ်းများ စာမျက်နှာ ၃၇၁။) ထို့ ကြောင့် အ စိုး ရ သည် က ရင် အ ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါကြေညာချက်ကို ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။
အစိုးရကြေညာချက်၁ (၁။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင်စာချုပ်စာတမ်းများ၊ စာမျက်နှာ ၃၇၁ မှ ၃၇၂ အထိ။)
၁။ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေသည့် အခုအချိန်အခါ မျိုး၌ ကွန်မြူနစ်အဖြူအနီနှင့် အချို့သော ဖဆပလအတိုက်အခံဂိုဏ်းသားတို့သည် အခွင့် ကောင်းယူ၍ ကရင်နှင့်ဗမာအထင်အမြင်လွဲ အောင် နိုင်ငံရေးအားဖြင့် လှုံ့ဆော်လာသည် ကို အထင်အရှားတွေ့လာရပေပြီ။
၂။ ဆူပူသောင်းကျန်းသူများဝေငှသော ကြေညာချက်စာတမ်းများတွင် ကရင်များက သူတို့နှင့်ပေါင်း၍လက်ရှိအစိုးရအားလက်နက် နှင့်တော်လှန်ပုန်ကန်မှ ကရင်အမျိုးသား၏ တောင်းဆိုချက်ကိုရမည်ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြထားလေသည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ်၊ မြောင်းမြ နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကရင်-ဗမာ အဓိက ရုဏ်းအနာဟောင်းကို ဆွပေးကြသေး၏။ ထို့ကြောင့် အချို့သောကရင်အမျိုးသားများ အဖို့ တွေးတောပူပင်စရာဖြစ်လာလိမ့်မည် ကား မုချဖြစ်ပေမည်။ တစ်ဖန်ယခုအချိန် အခါတွင် ကရင်လူမျိုးများကလည်း ဗမာ တိုင်းရင်းသားများကို အချို့ဒေသများ၌ နှိပ်စက်ကြသေးသည်။ ဗမာလူမျိုးများက လည်း ကရင်တိုင်းရင်းသားများကို အချို့ဒေသ များ၌ နှိပ်စက်ကြသေးသည်။ ဤမှ တစ်စတစ်စ အချို့သော ရပ်ရွာဒေသ များတွင် ကရင်လူကောင်းနှင့် ဗမာလူကောင်းတို့ပင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် မယုံနိုင်သောအခြေသို့ ရောက်ကြပြီးလျှင် တစ်ဦးအရိပ်အကဲတစ်ဦး က စောင့်၍ကြည့်နေကြတော့သည်။ မီးပွား နှင့်တူသည့်လှုံ့ဆော်မှုရှိလျှင် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းသည် အချိန်မရွေး မီးထလောင် နိုင်သည်။
၃။ အမှန်စင်စစ်ဆိုလျှင် သမိုင်း တစ်လျှောက်လုံး ဗမာနှင့် ကရင်တို့သည် ဂျပန်ခေတ်မှတစ်ပါး အခြားအချိန်များ၌ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသောသူများမဟုတ်ပေ။ ဂျပန်ခေတ်အတွင်းက ကရင်-ဗမာအဓိက ရုဏ်း ဖြစ်ပွားစဉ်ကပင် ကရင်-ဗမာလူထုကြီး ထဲမှ အနည်းငယ်မျှသော ကရင်-ဗမာအချို့ တို့သာလျှင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့သည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်။ မြောက်မြားစွာ တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံယုံကြည်ကြည် နေထိုင်ကြရုံမျှမက တစ်ဦး ဘေးရောက် မည်ကိုပင် တစ်ဦးက ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ခဲ့သေး၏။
၄။ သို့ရာတွင် လူမသမာသူတို့၏လက်ချက် သည် အောင်မြင်၍ အဆိုးဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်သည့်တိုင်အောင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်း အားဖြင့် ကရင်များကလည်း ဗမာများကို နာလန်မထူနိုင်အောင် ချေမှုန်းပစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဗမာများကလည်း ကရင်များကို နာလန်မထူနိုင်အောင်ချေမှုန်းပစ်နိုင်မည် မဟုတ်။ ကရင်တို့၏ရှိသမျှအင်အားနှင့် ဗမာတို့၏ ရှိသမျှအင်အားကို အစအဆုံး တွက်ကြည့်ပြီးလေပြီ။ သို့ဖြစ်ရာ ဤကဲ့သို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ကရင်များ၏ လိုလားချက်လည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပြည့်ဝမည်မဟုတ်။ ဗမာတို့၏လိုလားချက် များလည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြည့်ဝမည် မဟုတ်။ ဥသျှစ်သီး နှစ်လုံးထုသည့်အခါ ထုသည့်ဥသျှစ်သီးလည်းကွဲ၊ ခံသည့်ဥသျှစ်သီး လည်းကွဲသလို အဓိကရုဏ်းဖြစ်သည့်ကရင် နှင့်ဗမာတွေနှစ်ဦးစလုံး အလုပ်အကိုင်တွေ ပျက်၊ အိမ်တွေ၊ ရွာတွေမီးလောင်၊ လူတွေ သေကျေပျက်စီးခြင်းသာ အဖတ်တင်လိမ့် မည်။ ဤသို့အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကရင်နှင့်ဗမာတွေနစ်နာခြင်းသာ အဖတ်တင် လိမ့်မည်။ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ကောင်းကျိုး အဖတ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်သည်ကို အထူး ပြောနေစရာမလို။ ၁၉၄၂ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ကရင်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းက သက်သေ ခံလိမ့်မည်။
၅။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကရင်နှင့်ဗမာတို့ သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းကြပြီးလျှင် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း များကို အထူးရှောင်ရှားကြရန် လေးနက်စွာ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါကြောင်း။
အစိုးရ၏ကြေညာချက်ကြောင့် လူမျိုးရေးအဓိက ရုဏ်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သို့သော် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းချင်း ပဋိပက္ခမှာ ပိုမို၍ပြင်းထန်လာသည်။ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့်စေ့စပ်နေသဖြင့် မေတ္တာထားကြရန် မကြာခဏကြေညာချက်ထုတ်သည်။ သို့သော်တောင်းဆိုချက်များကိုမူ မလျှော့ပေ။
သထုံခရိုင်ကိုကေအင်န်ယူသိမ်းပိုက်ခြင်း၁ (၁။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စာရွက်စာတမ်းများ။)(၁၉၄၈)
သထုံမြို့ပေါ်ရှိကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင်များမှာ စောအုန်းဖေညွန့်၊ စောရှမ်းမောင်၊ စောရွှေဒုံး၊ စောဝီလီ ကျော်နှင့် စောအုံးဖေတို့ဖြစ်သည်။ စောအုံးဖေသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီကာလက သစ်တောဌာနတွင် ဝန်ထောက်ရာထူးဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်တပ်များ ဆုတ်ခွာသောအခါ အိန္ဒိယအထိလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း ဖာပွန် နယ်ထဲသို့ လေထီးဖြင့်ဆင်းလာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စစ် တပ်တွင် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်အထိ ရာထူးရရှိခဲ့ပြီး စစ်ပြီး သောအခါ သစ်တောဌာနတွင် ဝန်ထောက်ပြန်လုပ် သည်။ ၁၉၄၆ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ရက်တွင် စောအုံးဖေ သည် သထုံမြို့သို့ သစ်တောဝန်ထောက်အဖြစ်ရောက် ရှိလာသည်။ သထုံမြို့ရှိ ကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင် များသည် သထုံမြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုသိမ်းပိုက် နိုင်ရန် ၁၉၄၆ခုနှစ်ကတည်းက လျှို့ဝှက်စွာ ကြံစည်နေ ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ရက်တွင် သထုံမြို့ရှိ စစ်ရဲများက စတင်ပစ်ခတ်ပြီး မြို့အုပ်ချုပ် ရေးကိုသိမ်းယူသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ရက် တွင် သထုံမြို့ပေါ်ရှိ ကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင်များ၊ ကေအင်န်ဒီအိုတပ်ဖွဲ့များနှင့် အမ်းပုလိပ်(Arm Police)* (* စစ်ရဲများ။) များပူးပေါင်း၍ သထုံခရိုင်တစ်ခုလုံးကို စတင် သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားကြတော့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကေအင်န်ဒီအိုများက အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းသစ် များ ရေးဆွဲပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သစ်ကို ဖွဲ့လိုက်သော အခါအစိုးရ၏လက်ရှိခရိုင်ဝန်စောဘတ္တလားနှင့် ခရိုင် ရဲဝန်မစ္စတာ ဒက်တ်ဝက်တို့သည် ကေအင်န်ဒီအိုများနှင့် ပူးပေါင်းနေရတော့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂ဝ ရက်တွင်ကား သထုံခရိုင်တစ်ခုလုံး ကေအင်န်ဒီအို များ၏လက်သို့ ကျရောက်သွားပြီး ကော်သူလေးအစိုးရ ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ကြသည်။ စောအုံးဖေသည် ကေအင်န် ဒီအို စစ်မင်းကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ခရိုင်ရဲဝန် မစ္စတာဒက်တ်ဝက်နှင့် ဗမာ့တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ကြီးခင်ဇော်တို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီး၍ အကျဉ်းချ ထားကြသည်။ ကေအင်န်ဒီအိုများသည် သထုံခရိုင် အတွင်း၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖြန့်ခွဲ၍ တပ်စွဲထားကြ သည်။
သထုံခရိုင်တွင် ကေအင်န်ယူများ ဆူပူသောင်း ကျန်းကြပြီးနောက် မကြာမီ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်တွင် ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် အောက်ပါ အတိုင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏မရှင်းလင်းသော အခြေအနေများကို အားလုံးခြုံငုံကြည့်ပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိုးရိမ်စရာ ကောင်းသော ခေတ်ကြီးထဲတွင် ရောက်ရှိနေသည် ဟူသော အချက်ကိုလည်းကောင်း၊ ထို့ထက်သာလွန် ဆိုးရွားမည့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာဦးမည်ကို စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြသည် ဆိုသည့်အချက်ကို လည်းကောင်း ငြင်းဆိုနိုင်ရန် ခဲယဉ်းပေလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံး၌ပင် အေးချမ်းသာယာမှုကို ဖျက်ဆီးလျက် ရှိသော အင်အားစုများသည် သဲသဲမဲမဲထြ<ွကသောင်း ကျန်းလျက်ရှိကြရာ ကမ္ဘာ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ် သော မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ထိုမငြိမ်သက်မှု ဝဲသြဃ ကြီးထဲတွင် မျောပါပြီးလျှင် ပြဿနာအမျိုးမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ရမည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်တော့သည်။ ထို အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်မှာ မလွယ် ကူချေ။ ခိုင်ခံ့သော၊ သမာဓိကြီးမားသော၊ ညှာတာ ထောက်ထားခြင်းအားဖြင့် အဖျက်သဘောမဟုတ်၊ အပြုသဘောဖြစ်သော နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်ပါးနပ်မှု (ဝါ) မကုတတ်လျှင် ငန်းမန်းလိုက်သွားအောင် ဖြစ်စေနိုင် သော နိုင်ငံရေးအနာဆိုးကြီးကို သက်သာပျောက်ကင်း အောင် ကုသပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်ပါးနပ် မှုတို့ဖြင့်သာလျှင် ယခုလက်ငင်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံကြီး၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့နေကြရသော ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပေမည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေ သည့် အချိန်အခါကြီးတွင် လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ တော်ကြီး၏ ပထမအစိုးရအဖွဲ့သည် သတ္တိအရှိဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပင်လျှင် ချောက်ချားစေနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး တာဝန်ကြီးကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိနေသည်ဟူသော အချက်ကို စိတ်ရိုးစေတနာရိုးရှိကြသော နိုင်ငံသူနိုင်ငံ သားအားလုံးတို့သည် ဝန်ခံကြရပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ကိစ္စတိုင်းတွင် သဘောတူ ညီသည်ဟူ၍ကား မဆိုနိုင်။ ကွဲလွဲသည့်အချက်များတွင် ကွဲလွဲသည်ကိုကား ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံ၏။ သို့သော် မည်သည့် ကိစ္စ၌ပင် သဘောကွဲလွဲစေကာမူ တထိတ်ထိတ်တလန့် လန့်နှင့် ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေရသောဘဝမှ လွတ်မြောက်ပြီး လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များကို ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသများတွင် စိတ်ချလက်ချ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံတော်အစိုး ရကို ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၌ ယခုလိုအရေးကြုံနေသော အချိန်အခါကြီးတွင် အခွင့်ကောင်းယူ၍ ကရင်အမျိုး သားများအား တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေး ချက်မှာကား အခြားမဟုတ်ပေ။ ကရင်ပြည်နယ် သီးခြားတောင်းဆိုရာ၌လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့က ကရင်အမျိုးသားများကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် သီးခြား လူမျိုးကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရန်ကြိုးပမ်းရာ၌ လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ထက်စီးနင်းဝါဒကို လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်သောဝါဒကိုလည်းကောင်း ဘယ်နည်းနှင့်မျှအသုံးမပြုရန် သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ပြုထား ပြီးပြီဟူသော ကတိပေးချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သော ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင် နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမှုနှင့် အကြမ်း ဖက်မှု၊ လက်နက်အားကိုးပြုမှုတို့သည် အချည်းနှီး အလဟဿဖြစ်ခဲ့ရသော သင်ခန်းစာကို ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျိုးရှိစွာမှတ်သားကြပါစို့။ ယခုကဲ့သို့အရေးကြီး သောအချိန်တွင် ကရင်အမျိုးသားများသည် မျိုးရိုး အလိုက် ရိုးသားမှု၊ တရားမျှတမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းမှုတို့ကို လိုလားကြသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းတို့နှင့် လျော်ညီစွာ ကျင့်ဆောင်ရန် အထူးပင်လိုလားအပ် ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးစာရိတ္တကြီးကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မွေးမြူကြရန် ယခုအချိန်သည် ရှေးက ထက်ပို၍ အထူးလိုလားအပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသွင်းကြပါစို့။ ယခုအဖြစ်အပျက်များအရ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ အေးချမ်းမှု၊ တိုးတက်မှု၊ ဝပြောသာယာ မှုတို့ကို အနှေးအမြန်ရရှိရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်း မေတ္တာဓာတ်မွေးမြူ ကြပြီးလျှင် အပြိုင်အဆိုင်ဆိုလျှင် အများကောင်းကျိုး အတွက် သူ့ထက်ငါပိုလုပ်ပြမည်ဟူသော အပြိုင်အဆိုင် မျိုးသာရှိတော့မည့်ဘဝသစ်ကြီးကို ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးကြ ပါစို့။ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော အဆင့် အတန်းသို့ရောက်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောအရာ သည်ကား ကိုယ်ကျိုးအတွက် နိုင်လိုမင်းထက်ပြုကျင့်မှု မဟုတ်ဘဲ တရားမျှတမှုသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ် တို့ထာဝရနှလုံးသွင်းကြပါစို့။
ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် ဖဆပလအစိုးရနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရာတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမဖြစ် စေရေးအတွက် ခိုင်မာစွာ အာမခံပေးခဲ့ကြသည်။ အကြမ်းဖက်ဝါဒ၊ လက်နက်ကိုင်ဝါဒကိုလည်း လက်မခံ နိုင်ကြောင်း လူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ကြေညာသည်။ အဓိကရုဏ်းမဖြစ်ရေးကို ကြွေးကြော်သော်လည်း တောင်းဆိုချက်များကိုမူလျှော့၍မပေးပေ။ ကရင်တစ် ကျပ်၊ ဗမာတစ်ကျပ်ကြွေးကြော်သံနှင့် ကရင်ပြည် တောင်းဆိုမှုမှာ ပိုမိုကျယ်လောင်၍လာသည်။ ကရင် စစ်ရဲများမှာ အစိုးရ၏ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင်ရှိသည်။ ကရင်သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်းများ မှာ ဗမာ့တပ်မတော်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင်ရှိသည်။ ကေအင်န်ဒီအိုသာလျှင် ကေအင်န်ယူ၏ခါးပိုက်ဆောင်တပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် ကရင်စစ်ရဲများနှင့် ကရင် တပ်ရင်းများကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်ရဲဘော်ဖြူများ တောခိုသောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ကရင်စစ်ရဲများက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် အစိုးရငွေတိုက်နှင့်လက်နက်တိုက် များကို တိုက်ခိုက်လုယက်ဖောက်ထွင်းကြသောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ဖဆပလအစိုးရသည် ကာကွယ်ရေး တပ်ရင်း (ဘီတီအက်ဖ်)* (* Burma Territorial Force.) ၅၂ရင်းကို အမြန်ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်သည်။ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့က ဘီတီအက်ဖ်များ သည် ကရင်အမျိုးသားတို့အား နှိပ်ကွပ်ရန်ဖြစ်သည် ဟု စွပ်စွဲသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၄ရက်တွင် ကရင်စစ်ရဲများက တွံတေးမြို့ကိုသိမ်းလိုက်သည်။ သြဂုတ်လ ၂ဝရက်တွင် ကရင်စစ်ရဲများက မော်ချီးမိုင်း ကို သိမ်းလိုက်ပြန်သည်။ သြဂုတ်လ ၂၁ရက်တွင် သထုံနှင့်ကျိုက္ခမီ၌ စစ်ရဲများ အတိအလင်း ပုန်ကန် ကြပြန်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်တွင် ကရင်စစ်ရဲ များလက်သို့ မော်လမြိုင်မြို့ ကျရောက်သွားပြန်သည်။ မအူပင်၌လည်း အစိုးရငွေတိုက်ကို ဖောက်ယူကြ သည်။ ကရင်စစ်ရဲများသည် ခုခံသူများနှင့်အကြိတ် အနယ် တိုက်ခိုက်၍ မြို့ကြီးများကို သိမ်းပိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့တပ်စွဲထားသည့် မြို့၏အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို လွယ်လင့်တကူသိမ်းယူလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သို့နှင့် ကရင်စစ်ရဲများနှင့်စလိုက်သောကရင် သောင်းကျန်းမှုမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်၍လာတော့သည်။
ကင်းဘဲလ်-တူးလောက်အရေးအခင်း ၁ (၁။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင်စာချုပ်စာတမ်းများစာမျက်နှာ ၃၇၇။)
ကေအင်န်ယူများအားလက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်ရန် မြှောက်ပင့်သွေးထိုးပေးသည့်အပြင် လက်တွေ့အကူ အညီပါပေးနေသော နိုင်ငံခြားသားများတွင် ၁၃၆ တပ်ဖွဲ့တွင် အမှုထမ်းဖူးပြီး ကာလကတ္တားမြို့တွင်ရှိနေ သော ကာနယ်တူးလောက်* (* Col. Tullock.) သည် ထင်ရှားသည်။ ကေအင်န်ယူနှင့်ကာနယ်တူးလောက်ကို အဓိက ဆက်သွယ်ပေးသူမှာမူ လန်ဒန်မြို့ ဒေးလီးမေး(လ်) သတင်းထောက် အလက်ဇန္ဒြားကင်းဘဲ(လ်)** (** Alexandra Cambell.)ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးက ကာလကတ္တား တွင်ရောက်နေသော ကာနယ်တူးလောက်ကို သတိထား ရန်သတိပေးလာသည်။ ဗြိတိသျှC အစိုးရသည် ကေအင်န် ယူပုန်ကန်ရေးတွင် တရားဝင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကရင်အမျိုးသားအချို့ ကလည်း ကာနယ်တူးလောက်က သူပုန်ထရန် မြှောက်ပင့်ပေးနေကြောင်း သတင်းပို့တိုင်တန်း ကြသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကင်းဘဲ(လ်)သည် ရန်ကုန်မြို့ စထရင်းဟိုတယ်တွင် တည်းခိုလျက်ရှိသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်တွင် ကင်းဘဲ (လ်) က ကာလကတ္တားမြို့ စပင့်စ်ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေ သော ကာနယ်တူးလောက်ထံသို့ပေးပို့ရန် ကြေးနန်း တစ်စောင်နှင့် စာတစ်စောင်ကို ဘီအိုအေစီ လေကြောင်းကုမ္ပဏီမှ လေယာဉ်အမှုထမ်းဖြစ်သူ မစ္စတာအိုင်ဒီဆိုင်းမွန်း*** (***Mr. I.D Symon. )ဆိုသူအား လူကြုံပါး လိုက်သည်။ ကြေးနန်းနှင့် စာအိတ်ကိုလည်း ချိပ်ပိတ် ပေးလိုက်သည်။ သို့ရာတွင် မစ္စတာဆိုင်းမွန်းက လိုလိုမည်မည်စာအိတ်ကို ဖောက်ကြည့်လိုက်သော အခါ စာပါအကြောင်းအရာများကို တွေ့ရှိသဖြင့် မိတ္တူတစ်စောင်ကူးထားလိုက်သည်။ ထို့နောက် လေယာဉ်အမှုထမ်းဟော့စစ်ကို သက်သေအဖြစ် ပြသလိုက်သည်။ ကာလကတ္တားရောက်သောအခါ မူရင်းကြေးနန်းနှင့်စာကို ကာနယ်တူးလောက်ကိုပေး ပြီး မိတ္တူကိုတော့ယူထားလိုက်သည်။
ကင်းဘဲ(လ်)၏စာတွင် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ ၉ရက်ဟု ရက်စွဲတပ်ထားပြီး ကာနယ်တူးလောက်ကို ချစ်ဆွေဟော့(ပ်)ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။ စာပါ ကောက်နုတ်ချက်များမှာ၂ (၂။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင် စာချုပ်စာတမ်းများ စာမျက်နှာ ၃၇၈၊ ၃၇၉။) အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါ သည်-
'ခင်ဗျား၏စာကို အခြားနည်းမရှိသဖြင့် ကျွန်တော် အက်စ်အက်စ်သို့ ပေးလိုက်ပါသည်။ နံပါတ် ၁ သည် ယခုအိမ်တွင်ရှိ၍ခင်ဗျားကို စောင့်နေပါ သည်။ ပထမအသုတ်ပို့လိုက်မည့် လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက်များကိုလည်း စောင့်မျှော်နေကြပါသည်။ (ခင်ဗျားပြောခဲ့သည့် ဘရစ်စတိန်းသင်္ဘောနှစ်စင်း အကြောင်းကို အိုက သူတို့ကို ပြောပြပါသည်။) အခြေ အနေသည် သိပ်အရေးကြီးနေကြောင်း အက်စ်အက်စ် က ကျွန်တော့်ကို ပြောပါသည်။ နောက်ထပ်ပစ္စည်းများ မရရှိပါက ဤအတိုင်း ၁၄ရက်ခန့်ထက်ပို၍ လုပ်ကိုင် သွားရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ ဤဌာနချုပ်တွင် ကျွန်တော် နေ့ဝက်နေခဲ့ပြီး လာသမျှအစီရင်ခံစာတွေကို ဖတ်ခဲ့ ပါသည်။ အခြေအနေကို ကျွန်တော်တော့ ဒီအတိုင်းပဲ မြင်ပါသည်။ သူတို့မျှော်လင့်ထားကြသော အခြား လူနည်းစုများထံမှလည်း ဘာမျှအကူအညီမရပါ။ ထိုသူများမှာ မိမိဒေသများ၌ပင် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရင်း အေးဆေးစွာနေထိုင်လျက်ရှိကြ ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ တောင်ပေါ်မိတ်ဆွေများ သည်လည်း အချင်းချင်းသွေးကွဲနေကြသဖြင့် တောင်ဘက်သို့ ဆင်းလာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လောလောဆယ်တွင် သူတို့ထံမှ ဘာမျှမျှော်လင့်စရာ မရှိပါ။'
'ရန်ကုန်မြို့တွင်တော့ ယခုလောလောဆယ်တွင် လည်းကောင်း၊ နောင်အချိန်များတွင်လည်းကောင်း တိုက်ခိုက်ရန်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော့်အထင်ကို ပြောရမည် ဆိုသော် ကေတို့သည် ယခုလက်ရှိသူတို့သိမ်းပိုက်ထား သောနယ်မြေအားလုံး*(*လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ်ပါသော တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ။) ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုက ကျေနပ် ကြလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်၊ သူတို့သည် ထိုအချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အဆင်သင့်ပင်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်၊ အမှန်မှာ ကျွန်တော့် ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုသာ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားပြီးပြောရလျှင် ဤအခြေအနေ ဖန်တီးလာရသည်မှာ လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက် မလုံလောက်မှုကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်၊ သိပြီးဖြစ်သည့် အတိုင်း သူပုန်မထမီကပင် အစိုးရတပ်များက ကရင်များထံမှ လက်နက်များကို သိမ်းထားလိုက်ကြပါသည်၊ ထို့နောက် ယခုအခြေအနေမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ နောက်ပြီးသူတို့က ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုသမျှကို ခင်ဗျားက ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့် အားထားခဲ့ကြပါသည်'
မစ္စတာဆိုင်းမွန်းသည် ဗြိတိသျှဆိုရှယ်လစ် တစ်ယောက်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗြိတိသျှ တိုင်းရင်းသားအချို့က ပြည်တွင်းဆူပူရန် လှုံ့ဆော် နေသည်ကို များစွာစက်ဆုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကရာချိမြို့သို့ရောက်သောအခါ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဖေခင်၏လက်သို့ ကင်းဘဲ(လ်)၏ စာမိတ္တူကို အပ်နှံ လိုက်သည်။ အကျိုးအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြသည်။ ဦးဖေခင်က စာကို မြန်မာအစိုးရထံသို့ပို့လိုက်သည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်တွင် မစ္စတာအိုင်ဒီ ဆိုင်းမွန်းသည် မိမိလက်ထဲ စာရောက်လာပုံနှင့် သိရှိ ရသမျှကို လန်ဒန်မြို့၌ ကျမ်းကျိန်၍ ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
မစ္စတာအလက်ဇန္ဒြားကင်းဘဲ(လ်)ကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ အစိုးရသည် ကင်းဘဲလ်ထံမှ စာရွက် စာတမ်းအထောက်အထားများစွာ သိမ်းဆည်းရမိလေ ရာ အောက်ပါတို့မှာ ကောက်နုတ်ချက်များဖြစ်သည်။၁ (၁။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင် စာချုပ်စာတမ်းများ စာမျက်နှာ ၃၇၉ မှ ၃၈ဝ။)
ကျွန်တော်ရောက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်း မှာပင် အော်လီဗာ၏ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် ဆက်သွယ်မိပါသည်။ သူတို့ ကရင်ကလပ်တွင် နောက် ထပ်တွေ့ပါသည်။ ထိုသူမှာ အခက်အခဲမရှိဘဲ သူ၏ ဂျစ်ကားဖြင့် တိုင်းပြည်အနှံ့အပြားသွားလာနေပါသည်။ ကာလကတ္တားတွင်ရှိသောခင်ဗျားထံသို့ ရန်ပုံငွေများ ပို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံထားသောစာကို ထိုလူသို့ပေးလိုက် ပါသည်။ သူကလည်း စီစဉ်မည်ဟု ကတိပေးပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် သူတို့၏ဌာနချုပ်နှင့်အသံလွှင့်ရုံ တည်ရှိရာ အင်းစိန်သို့သွားရန် ကျွန်တော့်ကိုလာခေါ် မည်ဟု ပြောပါသည်။ သို့ရာတွင် နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် တယ်လီဖုန်းမှနေ၍ သူမလာရောက်နိုင် ကြောင်း ပြောပါသည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး တစ်ပတ်ကျော် ကျော် သူနှင့်မတွေ့ရတော့ပါ။ သူ့အကြောင်းလည်း ဘာမျှမကြားရပါ။ ယနေ့နံနက်တွင် သူပေါက်လာပါ သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ဝေရန် သတင်းများကိုပေးပြီး အမြန်ဆုံးထုတ်ဝေရန် မှာကြားသွားပါသည်။ အောက် ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ကရင်နီပြည်နယ်မှကရင်များသည် ကရင်နီပြည် နယ်တစ်ခုလုံးကို မော်ချီးမိုင်းမှ နမ်းဖဲအထိ သိမ်းပိုက် ထားသည်။ ဂျပန်များဆောက်လုပ်သွားသော လေယာဉ် ကွင်း တစ်ခုလည်း သူတို့လက်အောက်တွင်ရှိနေ၍ ယခု အခါပြင်ဆင်နေသည်။ သူတို့သည် လွိုင်ကော်ကို မတိုက် ခင် အင်အားဖြည့်တင်းရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ မှတ်ချက်။ (ဘဟန် အစိုးရအတွက်လုပ်နေသူ)နှင့် ဦးဘီ တို့သည် ရန်ငြိုးရှိကြသည်။ မကြာသေးမီက ဘဟန်တို့ လူစုသည် ဦးဘီအိမ်ကို ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရာ ဦးဘီ၏ လူ ၂ဝကို သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ဦးဘီ၏သားလည်းပါသည်။ ထို့နောက် ဦးဘီကို ဖမ်းဆီး ထားသည်။ လွိုင်ကော်မှ စောဝဏ္ဏသည် အစိုးရနှင့် အပေါင်းပါဖြစ်ပါသည်။
ကရင်များသည် သထုံ၊ ဖျာပုံနှင့် မော်လမြိုင်မြို့ တို့ကို သိမ်းပိုက်ထားသည့်အပြင် ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံးကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားသည်။ ကရင်စစ် အုပ်ချုပ်ရေး အစိုးရကိုလည်း မော်လမြိုင်တွင်ဖွဲ့စည်း ပြီးဖြစ်သည်။ အခြေအနေကိုလာရောက်စုံစမ်းသော အစိုးရလေယာဉ်တစ်စင်းကိုလည်း သိမ်းဆည်းထား လိုက်သည်။ မြိတ်နှင့်ပြည်မြို့များကို နှစ်ရက်အတွင်း သိမ်းပိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြသည်။
အော်လီဗာက သူတို့မှာလက်နက်ခဲယမ်းမီး ကျောက် အရေးတကြီးလိုကြောင်း၊ ခင်ဗျားက ခင်ဗျား ရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို မျှော်လင့်နေခြင်းမှာ သူတို့အတွက် ငွေကြေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကူအညီကို လိုချင် ဟန်တူပါသည်။ အမှန်အားဖြင့် ဘယ်လိုသဘောတူညီ ချက်တွေဖြင့် ဘာပစ္စည်းများပေးမည်ဆိုသောကိစ္စမှာ ခင်ဗျားပိုသိပါလိမ့်မည်။
ရှင်းရှင်းရေးရရင်တော့ လက်ရှိအခြေအနေကို ကျွန်တော်နည်းနည်းမျှမကျေနပ်ပါ။ အော်လီဗာနှင့်ျွနတက ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့သည့် ကတိအတိုင်း မိတ်ဆွေများက လိုက်နာသည်ကိုလည်း မတွေ့ရပါ။
မထုတ်ပြန်ရသေးသောသတင်းများကို ထုတ်ပေး နေသဖြင့် မနေ့က ကျွန်တော့်ထံသို့ သတိပေးစာ တစ်စောင်ရောက်လာပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော့် ကိုလည်း အကဲခတ်နေကြသည်ဟု ပြောပြန်သဖြင့် မိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်သွယ်ရာ၌ အခက်အခဲတွေ့ရပါ သည်။ ကာလကတ္တားသို့ ပစ္စည်းပို့ရန်လည်း မလွယ်ကူ လှပါ။ လေယာဉ်ကွင်းသို့ရောက်အောင် ၁၁မိုင်ကို ကား နှင့် သွားနေရပါသည်။ လေယာဉ်ကလည်း နာရီဝက် ခန့်သာရပ်နားပြီး လေယာဉ်မောင်းသမားများက လည်း မြို့ထဲသို့မလာကြပါ။
ကရင်နီပြည်နယ်အခြေအနေဆိုးရွားနေပါသည်။ အောင်မြင်မှုများကို စုပေါင်း၍ မြေပြန့်မှလူများကို လာရောက်ကူညီရမည့်အစား အချင်းချင်း ဘရင်ဂျီနှင့် ဘက်စ်ဘစ်(စ်) ဘာသာရေးစစ်ပွဲများ ဆင်နွှဲနေကြပါ သည်။ တောင်ဘက်တွင် အရေးတကြီးလိုအပ်နေသော အဖိုးတန်လက်နက်များလည်း သူတို့ထံမှ မရောက်လာ နိုင်တော့ပါ။ ထို့အပြင် ထိုဒေသကို အစိုးရက ပြန်သိမ်း ပိုက်မည်ကိုပင် စိုးရိမ်နေရပါသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့် အတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်းကလည်း ကရင်များဘက်က မပါဝင်သည့်အပြင် အစိုးရကို လုံးဝထောက်ခံအားပေး နေပါသည်။
အခြေအနေအားလုံး သိပ်တော့မလွယ်လှပါ။ အကယ်၍ ဖို့(စ်)ကသာ ပစ္စည်းများကို အမြန်ဆုံးမထုတ် ပေးနိုင်သဖြင့် အခြေအနေများအားလုံး ပျက်ပြားသွား မည့်အပြင် ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်း ငွေကြေးအကြီး အကျယ်ဆုံးရှုံး၍ မျက်နှာပန်းလည်းလှတော့မည်မဟုတ် ပါ။ ထို့ကြောင့်အခြေအနေတွေအားလုံး အဆင်ပြေ အောင် တစ်ခုခုအမြန်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ကြပါစို့။
ဖဆပလအစိုးရသည် မစ္စတာအလက်ဇန္ဒြား ကင်းဘဲ(လ်)အား နိုင်ငံခြားသားများ ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့သည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှ-မြန်မာချစ်ကြည် ရေးကို မထိခိုက်စေလိုသဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းပင်မပြုခဲ့ပေ။ သို့သော် လန်ဒန်မြို့ ရှိ ဒေးလီးမေး(လ်)သတင်းစာတိုက်ကမူ ကင်းဘဲ(လ်) အား အလုပ်မှထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကင်းဘဲ(လ်)-တူး လောက် အရေးအခင်းသည် ကမ္ဘာသို့ချက်ချင်းပျံ့နှံ့ သွားသည်။ လက်ဝဲဝါဒီများက ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့သမား၏ သူလျှိုဂိုဏ်းသည် ကေအင်န်ယူများကို လက်ကိုင်တုတ် လုပ်၍ လက်ဝဲဝါဒီများကို ဖြိုခွင်းနေပြီဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရက ကင်းဘဲ(လ်)နှင့်တူးလောက်သည် ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှပါလီမန်တွင် ကင်းဘဲ(လ်)-တူးလောက် အရေးအခင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ရာ လေဘာပါတီအမတ် ဝုဒရောဝိုင်းအက်* (* Wondraw Wyatt. )က အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ သည်။၁ (၁။ ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း စာမျက်နှာ ၃၁၂၊ ၃၁၃။)
တူးလောက်နှင့်ကင်းဘဲ(လ်)တို့သည် ကျောင်း သားများစွန့်စားတမ်း ကစားကြတာမျိုးလို သွားရောက် ပြီး ကရင်များကို သူတို့သူပုန်ထကြရင် လန်ဒန်ဓနရှင် ကြီးများက ကူညီလိမ့်မယ်။ လက်နက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ အားပေးအားမြှောက်ပြောကြပါတယ်။ သူတို့ဒီလိုပြောဆို ခွင့်မရှိကြပါဘူး။ ဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများက သူတို့ အကြောင်းပေါ်လာတော့ အထူးစိတ်နာကြပါတယ်။ ကရင်များကို အင်္ဂလိပ်တို့အကူအညီမပေးပါ၊ ကရင်များ ကသာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ချင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ကရင်များအား အကူအညီ မပေးရပါကြောင်း တွင်တွင်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ဖဆပလအစိုးရက ငွေချေးယူခွင့်တောင်းသည်ကို တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် လက်နက်ဝယ်ယူခွင့်တောင်းသော အခါတွင်လည်း ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ ဖဆပလအစိုးရသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ အလံနီပါတီနှင့်ရဲဘော်ဖြူများ တောခိုသောင်းကျန်းနေကြသောကြောင့် ဘေးကျပ်နံ ကျပ်ဖြစ်နေစဉ်တွင် ကရင်များအား အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက 'သူသည် သခင်နု မဟုတ်တော့ပြီ ကရင်နုဖြစ်နေပြီ'၂ (၂။ ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း စာမျက်နှာ ၃ဝ၃။)ဟု ဝေဖန်ခံနေရပြီ ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကင်းဘဲ(လ်)-တူးလောက်အရေးအခင်းဖြစ်ပေါ် သည့် အချိန်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်းတွင် ကေအင်န်ယူ အဖွဲ့သည် ပုသိမ်မြို့ ကရင်ကောင်စီ၌ အရေးပေါ် ညီလာခံတစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။၃(၃။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင် စာချုပ်စာတမ်းများ စာမျက်နှာ ၃၈၁။) ညီလာခံသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်နှင့် ၁၈ရက်တွင် ကျင်းပပြီး အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ကြ သည်။
၁။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော်ကြီးကို ဖန်တီးပေးသူ ထင်ရှားကျော်စောသော မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင် ကြီး မစ္စတာ မိုဟာမက်အလီဂျင်းနား ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်သွားသည့်အတွက် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်၌ ပုသိမ်မြို့၌ကျင်းပ သော ကေအင်န်ယူ ကွန်ဂရက်ကြီးကဝမ်းနည်း ကြောင်းကိုလည်း ပါကစ္စတန်ဘုရင်ခံချုပ်ထံမှ တစ်ဆင့် အခြားမွတ်စလင်နိုင်ငံများသို့ အကြောင်းကြားပေးပါရန် ဤကွန်ဂရက်ကြီးက ဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း။
(ထ၍တစ်မိနစ် ငြိမ်သက်စွာ နေရန်)။
၂။ မွန်၊ ကရင်သည် ဘဝကံတူအကျိုးပေးချင်းတူ သည့်အတွက် မကြာမီက ကေအင်န်ယူ ခေါင်း ဆောင်များနှင့်လူထုခေါင်းဆောင်များ အေးအတူ ပူအမျှ တစ်ဦးအခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကူညီကြရန် သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြု ကြေညာခဲ့သည်ကို ဤကွန်ဂရက်ကြ>ွခင်းချက်မရှိ ထောက်ခံ အတည် ပြုပါကြောင်း။
၃။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး၏ အခြေ အနေသည် တစ်နေ့တခြား ဆိုးရွား၍လာသည့် အားလျော်စွာ ကရင်တစ်မျိုးလုံး၏အသက်နှင့် စည်းစိမ်ကိုသာမက ကရင်အများအပြားနေထိုင် သော မြို့နယ်ရပ်ရွာများ၌ နေထိုင်ကြကုန်သော အခြားအမျိုးသား ကေအင်န်ယူအဖွဲ့များက ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကာကွယ်မည်သာမက အခြား အကူအညီလိုသောနေရာများသို့ ကာကွယ်ရေး လိုပါက အလျင်အမြန်အကူအညီပေးရန် ဤ ကွန်ဂရက်က ဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း။
၄။ ကရင်သီးခြားနယ်ရရှိရေးသည် ကရင်တစ်မျိုး လုံး မည်သည့်ပါတီဝင်ကရင်များမဆို စည်း လုံးရေးအပေါ်တွင် အဓိကတည်ရှိနေပါ၍ ကရင် တစ်မျိုးလုံးမကွဲမပြားစည်းလုံးရေးရရန်၊ ကရင် တစ်မျိုးလုံးသည် အေးအတူပူအမျှ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးလက်ချင်းတွဲ၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကွန်ဂရက်က ဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း။
၅။ ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းသည် ကရင်နယ် ရရှိရေးနှင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စေသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည်သာမက လုံးဝအလိုမရှိကြောင်း။ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းကို လှုံ့ဆော်သည့် ပါတီ တစ်ခုခုက ဖြစ်စေ၊ သတင်းစာတစ်စောင်စောင် ကဖြစ်စေ၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကဖြစ်စေပြုလုပ် ခဲ့သော် ဤကွန်ဂရက်က အပြင်းအထန်ရှုတ်ချ ပါကြောင်း။
၆။ ကရင်အမျိုးသားများ၏ လိုလားချက်များကို ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့ကြီးက ဒီမိုကရေစီဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် ဆောင်ရွက်သောနည်းလမ်းများကို မလိုလားပါကြောင်း။
၇။ ယခုအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်ကြီး၌ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများရှိရာ တိုင်းပြည်ရှိ လူထုမှာများစွာနေရေးထိုင်ရေးတွင် ချမ်းမြေ့ခြင်းမရှိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကေအင်န် ယူအဖွဲ့ကြီးကသိရှိရပါကြောင်း၊ အကယ်၍ တိုင်းပြည်ရှိ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုကို လိုလားသော လူထုအဖွဲ့အစည်းများ လိုလားပါက ကေအင်န်ယူ အဖွဲ့ကြီးက အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီစောင့် ရှောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဤကွန်ဂရက်က ဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း။
၈။ (ကေအင်န်ဒီအို) တံဆိပ်များကို တပ်ဆင်၍ ကေအင်န်ယူ အဖွဲ့ကြီး၏ အမည်ကို အလွဲသုံး စားပြုလုပ်ကာ ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်သူ အရေ ခြုံတစ်စုအား ထိရောက်စွာအရေးယူရန် ဤ ကွန်ဂရက်က ဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း။
၉။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများထက် သထုံ၊ မော်လမြိုင်နယ်များတွင် အခြေအနေပိုမို၍ အေးချမ်းငြိမ်သက်လျက်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါ သဖြင့် မကြာမီ ရက်အတွင်းကထိုနယ်များတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ကရင်နယ်မှာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသကဲ့သို့ပင် ထိုနယ်များမှာအမြန်ဆုံးနည်းနှင့် ရုပ်သိမ်းရန် ဤ ကွန်ဂရက်ကတောင်းဆိုပါကြောင်း။
အဆိုရှင်- ဗိုလ်ပုလဲ (မြောင်းမြ)
၁ဝ။ ကရင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်များ၏ အကျင့်စာရိတ္တမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဘာသာတရား တွင် ပြန်လည်လိုက်စားစေခြင်းအလို့ငှာ ဤ ကွန်ဂရက်က ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ဟောပြော ဆုံးမ သြဝါဒပေးခြင်းကို လိုသည်ဟုယူဆပါ ကြောင်း။
၁၁။ သီးခြားနယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့တွင် ကေအင်န် ယူမှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေမည်ရွေ့မည်မျှပါဝင် သင့်ကြောင်းနှင့် ပါဝင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်ရန်ဤကွန်ဂရက်က ကေအင်န်ယူ ဗဟို အမှုဆောင်အဖွဲ့လက်သို့ အပ်နှံပါကြောင်း။
၁၂။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ရက် နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်ဝန် ကြီးချုပ်ထံတောင်းဆိုထားသော ကရင်နယ် အကျယ်အဝန်းနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ကရင်နယ်အတိုင်း သီးခြားနယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ တွင် ဆောင်ရွက်သွားရန် ကိုယ်စားလှယ်များ ဆောင်ရွက်စေပါကြောင်း၊ သို့သော်အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်သွားရာ၌ ကိုယ်စားလှယ်တော်များသည် မိမိတို့အခြေ အနေနှင့်သင့်တော်သလို မိမိတို့Óဏ်သုံး၍ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြောင်းကို ဤကွန်ဂရက်က ဆုံးဖြတ်ပါကြောင်း။
ကေအင်န်ယူအဖွဲ့သည် လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းမှုကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း မကြာခဏ ကြေညာသည်။ အဓိကရုဏ်းကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းလည်း မကြာခဏကြေညာချက်ထုတ်သည်။ သို့သော် ကရင် စစ်ရဲများနှင့် ကရင်ကာကွယ်ရေးတပ်(ကေအင်န်ဒီအို) များ၏ လှုပ်ရှားထြ<ွကမှုမှာ ပို၍ဆိုးရွားလာသည်။ စောဘဦးကြီးသည် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့်တကွ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များအား စိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိစေရန် အမျိုးမျိုး ကတိပေးခဲ့သည်။
စောဘဦးကြီးသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၉ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အလုံမစ်ရှင်လမ်းရှိ ကရင် အမျိုးသားကလပ်တွင် ထမင်းစားပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပ သည်။ ထမင်းစားပွဲသို့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနှင့် ကချင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ မြန်မာစသည့် ခေါင်းဆောင်များကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ယင်းချစ်ကြည်ရေး ထမင်းစားပွဲတွင် စောဘဦးကြီးက မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားရာ ကောက် နုတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-၁ (၁။ ရဲဘော်လှမျိုး၏ သမိုင်းဝင် စာချုပ်စာတမ်းများ စာမျက်နှာ ၃၈၄ မှ ၃၈၇။)
''သခင်နုနဲ့ကျွန်တော် ကျွေးမွေးတဲ့ ထမင်းရာဇဝင် ကတော့ အတော်ရှုပ်သားပဲ၊ စတာကတော့ ဟိုအရင် ကရင်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းက စခဲ့တာပဲ၊ ဂျပန်ခေတ်က လွဲလို့ သခင်နုနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လူချင်းခပ်လှမ်းလှမ်း ပဲ နေခဲ့ကြပါတယ်၊ လပွတ္တာမြို့နယ် ကရင်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်တော့မယ်လို့ သတင်းတွေဖြစ်လာတဲ့ အခါ သခင်နုက ကျွန်တော့်ထံ စာပေးခေါ်ပြီး လပွတ္တာ ကိုသွားပြီး တရားဟောဖို့ အရေးကြီးကြောင်းပြောတော့ ကျွန်တော်သဘောတူလိုက်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့် သဘောတူသလဲဆိုတော့ (အကြံတူ ရန်သူ၊ အကျိုးတူ မိတ်ဆွေ) ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း အဓိကရုဏ်းမလိုလား တဲ့ အကျိုးကတူနေတာကိုး၊ ကရင်-ဗမာ အဓိကရုဏ်း တော့ ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ သွားခဲ့ကြတဲ့အခါမှာ စောသာဒင်၊ မန်းဂျိမ်းထွန်းအောင်၊ ဆမားဒူဝါ ဆင်ဝါးနောင်၊ ဦးဝမ်းသူမောင်တို့လည်း ပါကြပါတယ်၊ ၇ ရက်လောက် အတူသွားမိတဲ့အခါ သခင်နုနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ပိုမိုရင်းနှီးပြီးတော့ မိတ်ဆွေရင်း ကြီး ဖြစ်လာတာပါပဲ''
''စကော့တလန်ပြည် ဟိုင်းလင်းဒါးလူမျိုးများဟာ ဧည့်သည်မိတ်ဆွေများကို ကျွေးမွေးတဲ့အခါ ဆားပါလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဆားကို စားတဲ့လူဟာ ဘယ်တော့မှ မကောင်းမကြံအပ်ဘူးလို့ အယူရှိပါတယ်။ ဗမာပြည် တောင်ပေါ်များမှာလည်း သူ၏ထမင်းကို စားပြီးရင် သူ့ကို မကောင်းမကြံအပ်ဘူးဆိုတာရှိပါတယ်။ မြေညီ မှာလည်းပဲ (ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်မပြစ်မှားပါဘူး ခင်ဗျားကျွေးတဲ့ထမင်းဟာကျုပ်လည်ပင်းထဲမှာ ရှိပါ သေးတယ်)ဆိုတဲ့ စကားနဲ့(ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးမစွပ် ကောင်းဘူး)ဆိုတဲ့ စကားပုံများလည်းရှိပါတယ်။ ၇ရက် ကြာမျှ ခရီးထွက်ကြစဉ်အခါက သခင်နုက ကျွန်တော့် ကို ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှိပါတယ်။ သခင်နုဟာ ကျွန်တော့်အိမ်ကိုြ<ွကလာလိုသော်လည်း အိမ်က တဲကုပ်ကလေးဖြစ်လို့ မဖိတ်ကြားခဲ့ရဘူး။ ယခု အခါတော့ ကျွန်တော်က ဖိတ်ထားလို့ ကျွန်တော့် တဲကုပ်ကို သခင်နုရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ယခုအခါမှာလည်း သခင်နုကို ကျွန်တော်က ကျွေးရပြန်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ယခုတော့ (သူကျွေးကျွန်တော်ကျွေး) ဖြစ်ရပါပြီ။ ဒါဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရင်းနှီးစွာ အပြန်အလှန် ကျွေးမွေး ကြတဲ့ရာဇဝင်ပါပဲ။''
''ကျွန်တော်ဟာ ကြွားမပြောလိုပါဘူး၊ မြန်မာပြည် အတွင်းမှာ အတော်အနှံ့အပြားရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ပြည်ပဆိုရင်လည်း အရှေ့ဘက်၊ အနောက်နဲ့ မြောက် ဘက် တိုင်းပြည်များကိုလည်း ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒီလိုရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် (ကိုယ့်ဒူးတောင် ကိုယ်မယုံ ရဘူး)ဆိုတဲ့ ဗမာစကားပုံတစ်ခုကို စဉ်းစားမိပါတယ်၊ ကိုယ့်ဒူးတောင်ကိုယ်မယုံရင် အခြားသူကိုယုံရမှာလား၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဟာ ကိုယ့်ဒူးဖြစ်ပါတယ်၊ အခြားလူဆိုတာက အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ရုရှားစတဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်၊ သည်တော့ ကျွန်တော် ပြောလိုတာက မယုံရသူကို အားမကိုးသင့်ဘူး၊ ကျွန်တော်လည်းအားမကိုးပါဘူး၊ ခင်ဗျားတို့လည်း အားမကိုးကြပါနဲ့''
''နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က(ခင်ဗျားတို့ တိုင်း ပြည်ကို မအုပ်ချုပ်ချင်ပါဘူး ကုန်ကူးလိုတာပါပဲ) လို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောဖူးပါတယ်၊ အမှန်တော့ ပြည်ပမှ လူ တွေဟာ ကုန်သည်ချည်းပါပဲ၊ ကုန်သည်ဆိုပေမယ့် ကုန်သည်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး၊ (ကုန်သည်သာမက အကုန် သယ်မှာ)၊ အခုတစ်ခေါက် သူတို့ပြန်လာရင်တော့ အကုန်ပဲ၊ တချို့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ပြန်ဝင်ချင်လို့ ထင်ကြသေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီလောက်အထင် မသေးပါဘူး၊ သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်ပိုသိပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ခပ်ရှင်းရှင်းနေခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့ ကို အားမကိုးပါဘူး၊ ဒါတင်မကသေးဘူး၊ ကျွန်တော် လိုလားတဲ့ သီးခြားပြည်နယ်အတွက် ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာ မတရားဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး၊ တရားလမ်း ရှိတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲ''
''ကျွန်တော်တို့ ကရင်အမျိုးသားများကို သတိပေး လိုတဲ့ အချက်များလည်းရှိပါတယ်၊ မိမိတို့လိုတဲ့ သီးခြား ပြည်နယ်တော့ ရှိပါပြီဆိုပါတော့၊ မိမိတို့ဟာ ဒီသီးခြား နယ်နဲ့တန်ရဲ့လား၊ မတန်ရင်ဒီသီးခြားနယ်တောင်းဖို့ ကောင်းမလားဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း အထူးစဉ်းစားဖို့ရှိ ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ကရင်များဟာ သီးခြားနယ်နဲ့ တန်ရဲ့လားလို့မေးရင် တန်တယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်၊ ခင်ဗျားတို့နယ်ကို ဓားပြလူဆိုးတွေ အုပ်ချုပ်ရင်ကြိုက် မလားလို့မေးရင် မကြိုက်ဘူးလို့ ဖြေကြလိမ့်မယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်က သူခိုးဓားပြတွေဖြစ်နေရင် ဒီ သီးခြားနယ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ တန်မလား၊ မတန်ဘူးလို့ ဆိုရမယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သတိပေးလိုတာက သီးခြားနယ်နှင့်နေလိုကြရင် သီးခြားနယ်နဲ့တန်အောင် နေကြပါ၊ သူခိုးဓားပြမျိုး ဖြစ်နေကြရင်တော့ သီးခြား နယ်နဲ့ မတန်သေးဘူး၊ ဒါကိုခင်ဗျားတို့ အထူးစဉ်းစား ကြပါ''
''မအူပင်ငွေတိုက်ကို ဖောက်သွားသူများဟာ ကရင် ၁၉ ယောက်ဖြစ်တယ်၊ ကြားရတာ စိတ်မကောင်း ပါဘူး၊ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပမာလေးတစ်ခု ပြောပြလိုက်ပါတယ်၊ မြောင်းမြနယ် သိလ္လာဆိုတဲ့ ရွာ တစ်ရွာမှာ အသက်၆ဝကျော် ဦးလွန်းဘော်ဆိုတဲ့ အဘိုး ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သားသမီး ၁၂ယောက်၊ မြေး မြစ်များလည်းရှိတယ်၊ သူ့မှာ လယ်နည်းနည်းရှိတဲ့ အပြင် အသီးအနှံစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်လည်းရှိတယ်။ ဝက်၊ ဘဲ၊ ကြက်တို့လည်း မွေးထားတယ်၊ သူ့ရွာက လမ်းဆုံကျတဲ့အတွက်ခရီးသည်များဟာများသော အားဖြင့် တည်းခိုကြတဲ့အခါ ခရီးသည်တိုင်းလိုလိုပဲ ထမင်းချက်ကျွေးတယ်၊ ထူးခြားချက်တစ်ခုက (အသီး အနှံများကို မခူးရ) ဆိုတဲ့ စာရေးထားတယ်၊ ခိုးလည်း မခိုးရဲကြဘူး၊ တကယ်လို့ သစ်သီးခိုးတာများ တွေ့ရင် တော့ ဒီခိုးတဲ့လူဟာ မသက်သာဘူး၊ သွေးထွက်သံယို ဖြစ်အောင်ချတော့တာပဲ၊ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီရွာ အဘိုးကြီးအိမ်ရောက်သွားလို့ ဧည့်သည်အဖြစ် ခေတ္တ တည်းခိုစဉ် သူရိုက်နှက်ပုံအကြောင်းတွေကြားရတော့ အကြောင်းသိချင်တာနဲ့ အဘိုးကြီးနားကပ်ပြီး (ဖထီး သစ်သီးလေး တစ်လုံးခိုးတာနဲ့ ဘာကြောင့်ဒါလောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်သလဲ) လို့မေးကြည့်တော့ ဖထီးက (ကျုပ်ဆန္ဒက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် သူခိုးမဖြစ်စေလိုဘူး၊ သူခိုးတာကြည့်နေလိုက်ရင် သူ့အိမ်သားတွေပါ သူခိုး မျိုးဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်၊ သူခိုးမျိုး မဖြစ်ကြစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရိုက်တာပါပဲ) လို့ ပြန်ပြောတယ်''
''အဲဒီအကြောင်းလေးတွေကို တွေးပြီးတော့ မအူပင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာ ကရင်ကလေး ၁၉ ယောက် ဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းလည်း ကရင်ပဲ၊ ၁၉ ယောက်ကလည်းကရင်ပဲ၊ ငွေကလည်းမနည်းဘူး၊ ဒီငွေ တွေကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး ထံပျံ့သွားမယ်၊ ပျံ့သွားရင် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး သူခိုးမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပဲ၊ ဒါကြောင့် သူခိုးမျိုးတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ငွေအစား ပြန်ဆပ်နိုင်အောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရှေ့ဆောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါပြီ၊ တစ်မျိုးလုံး ဓားပြမဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်တော်နဲ့ ကေအင်န်ယူတစ်မျိုးလုံးက ဒီငွေကို ဆပ်ရမှာပဲ၊ ဘယ်အထိဆပ်မလဲဆိုရင် ကျွန်လုပ်ပြီး ဆပ်ရမှာပဲ၊ ဆပ်မယ်ဆိုတာက ပြောတော့လွယ်တယ်၊ ဘယ်လိုဆပ်မလဲမေးစရာရှိတယ်၊ အခြားသူများ မဆပ်ခင် ကျွန်တော်က စတင်လုပ်ပြပြီး ဆပ်ရမှာပဲ၊ မနေ့ညက ဒီအရေးတွေးပြီး တစ်ညလုံးအိပ်လို့မရ ပါဘူး၊ ကျွန်တော့်မှာဆပ်စရာ ပိုက်ဆံတော့မရှိဘူး၊ လယ်ဧက ၁ဝဝဝလောက်ရှိတယ်၊ ဒီလယ်ဧက ၁ဝဝဝ ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအား အပ်နှင်း ပေးဆပ်လိုက်ပါ့မယ်၊ အခု လယ်ကို ချက်ချင်းမယူ သေးရင် လယ်မြေပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထား တဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်းဆုံးဖြတ်တာပေါ့၊ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ခါးသာမလှရှိမယ်၊ ဝမ်းတော့ဝနိုင်ပါသေးတယ်၊ ကျွန်တော့်မိန်းမသဘောတူပြီးဖြစ်တာကို ကျွန်တော် သိပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ဆက်လက်ပြီး တစ်ပြည်လုံး သဘောပေါက်အောင်လုပ်ပြရပါအုံးမယ်''
''ဒီပြင်ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်၊ ဒါက တခြား မဟုတ်ဘူး၊ နာမည်ကြီးနေတဲ့အင်းစိန်ကိစ္စပါပဲ၊ ကရင် တွေ သေနတ်လက်နက်များဖောက်ယူသွားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ သတင်းစာတွေကလည်း ဘာမဆို ကရင် တွေဆိုပြီး အားလုံးသိမ်းကျုံးရေးကြတာပဲ၊ တစ်ခုပြော လိုတာက အင်းစိန်မှာဖြစ်တာက ကရင်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့ကရင်လည်းရှိ၊ မကောင်းတဲ့ ကရင်လည်းရှိလေတော့ အကောင်းနဲ့ မကောင်းခွဲခြား ရေးကြရန်ကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ ကေအင်န်ယူအပြစ်မဟုတ်သော်လည်း ဒီလက်နက် တွေပြန်ပေးအောင်တော့ တောင်းပန်ရအုံးမှာပဲ''
''ကရင်လူကောင်းများလက်တွင်ရှိတဲ့ လက်နက် များကို ဒီနေ့ကစပြီး နှစ်လအတွင်းပြန်ထမ်းပို့ကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒီတောင်းပန်တဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက် လို့လည်း ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်၊ အမျိုးသားစိတ်မရှိသူကရင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်၊ သူတို့ကတော့ သေနတ်ကိုယူပြီး မသမာသူများလက်ကို ရောင်းစားရင် ရောင်းစားမှာပဲ၊ ဒါတွေဟာလည်း မဆိုင် ပေမယ့် အပ်အောင်လုပ်ရမှာပဲ၊ မအပ်ရင်တော့ ဆုံးမ ရမှာပဲ၊ ကျွန်တော်ယခုလိုပြောပြတဲ့အတိုင်း တောင်းပန် ဆောင်ရွက်လို့မှမရရင် ကေအင်န်ယူဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်လိုက်ပါမယ်''
''ယခုကြွရောက်လာကြတဲ့ လူကြီးမင်းများမှာ ဗမာ၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ မွန်စသည်ဖြင့် စုပေါင်းရောက်လာ ကြသော ပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဇာစ်မြစ်ကိုသေသေ ချာချာကြည့်ရင် အားလုံးဆွေမျိုးတွေချည်းပဲဖြစ်ပါ တယ်၊ ခင်ရာဆွေမျိုးဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်၊ ဒီကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ဖန်တီးလုပ်ကိုင်နိုင်ကြတာဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ဆွေမျိုး များဖြစ်လို့ ဖြစ်ကြပါတယ်''
''သည်နောက် အရေးတကြီးလုပ်စရာရှိတာက တော့ ရွာတွေမှာကြောက်လန့်ပြီးတစ်ရွာမှတစ်ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်၊ ကွန်မြူနစ်တွေ ကြောက်လို့ပြေးကြရတာလည်းရှိတယ်၊ တချို့ကရင်ကို ကြောက်လို့ ဗမာကပြေးရတာလည်းရှိတယ်၊ ဗမာကို ကြောက်လို့ ကရင်ကပြေးရတာလည်းရှိတယ်၊ အမှန် တော့ ဒါတွေဟာလူမသမာတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာပဲ၊ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် လူကောင်းတွေစုပြီး ဆောင်ရွက် ရလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ကေအင်န်ယူက လက်လှမ်းမီ သမျှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာပဲ''
''မိမိတို့ဆိုင်ရာနယ်မှပြောင်းရွှေ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဗမာများရှိရင် စိတ်ချလက်ချပြန်လာဖို့ကို ကရင်ရော ဗမာရောပေါင်းပြီး သွားရောက်ပြန်ခေါ်မယ်၊ ထို့အတူ ကရင်များကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်း ဗမာရော ကရင် ရော ပေါင်းပြီးသွားခေါ်ရမယ်၊ စိတ်ချလက်ချသင့်မြတ် နေရအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်၊ အပြော နဲ့မပြီးဘူး၊ ချက်ချင်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်''
''ပုသိမ်မှာကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ဂရက် အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ဗမာပြည်သူလူထုက အကူအညီ တောင်းပါက တိုင်းပြည်အေးချမ်းရေးအတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက်မယ်လို့ အတိအလင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ အကူအညီတောင်းရင်ပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ၊ လုပ်ရန်စည်းမျဉ်းလည်းဆွဲနေပါတယ်''
စောဘဦးကြီးသည် ချစ်ကြည်ရေးထမင်းစားပွဲ မိန့်ခွန်းဖြင့် ဦးနုနှင့်ဖဆပလခေါင်းဆောင်များကို ချွေး သိပ်လိုက်နိုင်သည်။ ကရင်များက မအူပင်ငွေတိုက်ကို ဖောက်၍ လုယက်မှု၊ အင်းစိန်တွင်လက်နက်သိမ်းမှုများ ကိုလည်း ကျေနပ်အောင် ဖြေရှင်းပြသွားသည်။ မအူပင် ငွေတိုက်မှငွေများကို မိမိ၏လယ်ဧက ၁ဝဝဝရောင်းချ ၍ လျော်ပါမည်။ သေနတ်များကိုလည်း နှစ်လအတွင်း ပြန်အပ်ခိုင်းပါမည်။ မအောင်မြင်ပါက ကေအင်န်ယူ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပါမည်ဟူ၍ပြောခဲ့သည်။ သို့သော်စောဘဦးကြီး၏အပြောနှင့်လက်တွေ့လုပ်ရပ် မှာ တခြားစီသာဖြစ်နေသည်။ ဆမားဒူဝါဆင်ဝါး နောင်က ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက်တွင် အခြေ အနေ ဆိုးရွားလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်များက အစိုးရ ကိုတိုက်ရန် ကချင်များထံမှ စစ်ကူတောင်းကြောင်း သခင်နုထံသို့ အစီရင်ခံခဲ့သည်။
သခင်နုက ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအား ဘီတီအက်ဖ် ကာကွယ်ရေးတပ်များ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် မတိုင်မီ အပြီးဖွဲ့ရန်တာဝန်ပေးသည်။ ကရင်များ က ကရင်တွေကို နှိပ်စက်ရန်ဟုဝေဖန်သည်။ သခင်နု က ကရင်များငြိုငြင်မည်စိုးသဖြင့် ကောင်းသော ကရင် များကို မထိခိုက်စေရန် ကရင်ပြဿနာဟုမခေါ်ကြရန် တားမြစ်လာသည်။ လက်တွေ့တွင်မူ ကရင်တပ်များနှင့် အစိုးရတပ်များမှာ အချို့နေရာများတွင် တိုက်ခိုက်နေ ကြပြီဖြစ်လေသည်။
Posted by Myanmar Political Research Organization at 2:29 PM